AirPower, isi ihe na-eme iPhone, Airpods na Apple Watch na-enweghị eriri | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | Ngwa, Apple
Ka ọ dịgodị Apple ọkwa. Na mbata nke ndị eze nke Cupertino katalọgụ, iPhone 8, iPhone 8 Plus na iPhone X, enwere ọkwa ndị kpuchiri. Enwere ihe ijuanya ndị ọzọ zoro ezo na nke a - ncheta maka ụfọdụ, na-agwụ ike maka ndị ọzọ - ihe ngosi na-echeta afọ 10 mbụ nke ndụ iPhone. Ihe omuma atu doro anya bu ugwo ohuru ohuru nke gha adi ka eriri nke table oru gi, ihe nzo gi ma obu ulo obula bu akuku nke gara aga. Ọ bụ ihe gbasara AirPower na-akwụ ụgwọ isi.
Otu n'ime njirimara ndị na-agakarị na nsụgharị niile anyị na-ahụ n'oge na-adịbeghị anya bụ ohere nke ịme ebubo ngwaọrụ site na teknụzụ ntinye; nke ahụ bụ, ụgwọ batrị na-enweghị ụdị eriri ọ bụla metụtara. Kedu ihe ọzọ, a na-eji teknụzụ a eme ihe na mpaghara akụrụngwa. Ngalaba na-akụ nzọ na ntanetị nke ụdị ya n'ọdịnihu yana nke ahụ na-akụ nzọ na ikuku na-akwụ ụgwọ site na nyiwe agbanwe agbanwe.
Ma ilekwasị anya ọzọ na ihe ọhụrụ AirPower, anyị nwere ike ịgwa gị na ntọala a abụghị ihe a na-ahụkarị na mpaghara ahụ. N'ihi gịnị? Ọfọn, n'ihi na e mere ya iji nwee ike ịba n'ụlọ ihe karịrị otu ngwaọrụ n’elu ya ma kwụọ ha ụgwọ n’out oge. Iji kọwaa nke ọma, AirPower ga-abụ otu n'ime ngwa kpakpando - anyị ji n'aka - ọ bụ ezie na Apple anaghị atụ anya ịnwe ya maka mkpọsa Krismas na-esote. Emegharighariri mbido ya ruo na 2018.
Omume ya ga - abụ otu a: inwe ike ụlọ atọ Ngwa na anyị na-ebu mgbe niile: Apple Watch - cheta na a ga-enwe ugbu a mbipute na LTE-, iPhone na AirPods, ekweisi ekweisi Cupertino a ma ama. E gosibeghị ọnụahịa ya, maka oge ahụ. Ugbu a, site n'oge a na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị Apple ị nwere ike ịchọta chaja ikuku abụọ maka kọmputa gị: isi mophie na Isi Belkin. Ha abụọ dị ọnụ na euro 64,95.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » AirPower, isi ihe na-eme iPhone, Airpods na Apple Watch na-enweghị eriri
iOS 11 ga-abata na nke ikpeazụ ya na September 19
iPhone 8: ọnụahịa na ụbọchị ịhapụ